WR3D 2K21 Apk misintona maimaim-poana ho an'ny Android [2022 Update]
Ianao ve mitady ny ady farany, izay fantatra amin'ny anarana hoe WWE? Raha eny, dia eto isika miaraka amin'ny sehatra filalaovana tsara indrindra, izay fantatra amin'ny anarana hoe WR3D 2K21. Io no fampiharana Android farany, izay manome ny lalao tsara indrindra ho an'ny fialamboly amin'ny tolona. Alao ny atleta tianao indrindra ary vonona ny hiady amin'ireo mpilalao tsara indrindra.
WWE dia iray amin'ireo sehatra fialamboly tsara indrindra eran'izao tontolo izao, izay manome ny sehatra tsara indrindra ho an'ny atleta ho malaza amin'ny alàlan'ny fialamboly olona hafa. Izy io dia manana hetsika samihafa manerana an'izao tontolo izao ary miaraka amin'ireo mpankafy an-tapitrisany amin'ny firenena rehetra.
Tian'ny olona ny mijery ady amin'ny mpilalao samy hafa ary mankafy ny hetsika mivantana. Misy vokatra samihafa hita eny an-tsena, izay manome ny mpankafy azy hanana ampahany amin'ny WWE. Toy izany koa, misy lalao samihafa azo alaina sy ankafizin'ny mpampiasa.
Noho izany, amin'ity Taom-baovao ity, eto izahay miaraka amin'ity kinova WWE mahatalanjona ity, izay manome ny endri-javatra sy serivisy farany ho an'ireo mpampiasa mba hanana gaga tsy misy farany. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity fampiharana ity ianao dia mijanona miaraka aminay ary mahazoa ny fampahalalana manan-danja rehetra.
Topimaso momba WR3D 2K21 Apk
Fampiharana lalao Android izy io, izay manolotra sehatra filalaovana hetsika tsara indrindra ho an'ny mpilalao hankafy. IT dia miorina amin'ny WWE ary manome traikefa tsara indrindra hilalao amin'ny fampiasana ny WWE-Star ankafiziny. Miomàna hanangana ny asa superstar tianao indrindra ary ankafizo ny milalao. Raiso maimaim-poana amin'ity pejy ity ity fampiharana ity ary ankafizo ny lalao.
Misy kinova azo jerena eny an-tsena, saingy mba hahazoana ilay rindranasa ofisialy dia mila mandoa vola ny mpampiasa. Sarotra ho an'ny mpankafy rehetra ny mampiditra vola amin'ny lalao, ka izany no nahatongavanay teto niaraka tamin'ny WR3D 2K21 Mod Download ho anao hankafizinao maimaimpoana ny lalao.
Ny kinova farany dia manolotra fanangonana lisitra be dia be mba hankafizin'ny mpampiasa. Izy io dia manolotra lisitra mihoatra ny 20 samihafa ho an'ny mpilalao hahitana ireo toetra sy hetsika. Azonao atao ny mahazo ny lisitra sy mpilalao malaza indrindra, izay ahitana ny RAW, SmackDown, ary NXT ao amin'ny WR3D 2K21 an'ny HHH.
Misy fihetsika vaovao tsy mitovy ampiana ao amin'ny kinova farany ho an'ny mpilalao hanana fifehezana bebe kokoa sy traikefa tsara kokoa. Azonao atao ny mampiasa ny hetsika manokana amin'ny lalao mba hanimba bebe kokoa ny mpanohitra anao.
Ny mpilalao dia afaka milalao amin'ny fomba fiasa, izay tsy maintsy hananganana ny toetrany ary hanatevin-daharana hetsika samihafa mba hahatonga azy ireo ho mpiady tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ny toetranao dia afaka manana ny anarana ao amin'ny Hall of Fame. Mila manao ny toetranao tsy ho resy ianao ary manao ny tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Misy lalao haingana ihany koa mba hitsapana ny fahaiza-manaonao sy ny fihetsehanao, izay azonao jerena ao amin'ny torolàlana ary ampiharina amin'ny lalao haingana. Afaka mahazo isa fanampiny ianao amin'ny filalaovana lalao haingana sy fandravana ireo mpifanandrina aminao amin'izany Lalao 3D.
Wr3d WWE 2k21 Mod Download Apk Free Download ary ankafizo ny gameplay. Zahao ny fiasa farany an'ity kinova mahagaga ity. Misy karazany samihafa azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa mpampiasa Android avo lenta ary koa ho an'ny mpampiasa ambany.
Noho izany, hizara dikanteny roa miaraka aminao izahay. Raha mpampiasa Android avo lenta ianao dia azonao atao ny misintona ny kinova lehibe amin'ity lalao ity. Fa raha tsy mampiasa fitaovana Android ambany ianao dia azonao atao ny mampiasa ny kinova malemy.
Ao amin'ny lite, ny sasany amin'ireo fiasa dia tsy misy, izay misy koa ny fampisehoana ambany kalitao sy serivisy hafa. Noho izany, raiso ny traikefa mahavariana amin'ny filalaovana amin'ny fitaovana Android. Mila mampiasa WR3D 2K21 Mod Apk ho an'ny Android fotsiny ianao ary mankafy ireo fiasa mahagaga rehetra.
anarana WR3D 2K21
Anaran'ny fonosana rivotra.WR3D21LiteHHH
Gameplay tsara indrindra
Tohano ny maody maromaro
Rosters vaovao azo
Mikaroha fihetsiketsehana ady vaovao
Fanangonana karazan'olona marobe
Nampiana hetsika vaovao
Misy Lite Version
Raha misintona ity lalao mahavariana ity dia eo amin'ny toerana mety ianao. Wr3d 21 Misintona avy amin'ireo bokotra misintona hita amin'ity pejy ity. Mila mikitika ny bokotra fampidinana fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Manome kinova roa izahay. Noho izany, kitiho ny fampidinana araka ny filanao. Azonao atao ny mahazo ny dikan-teny roa ary mahita ny tsy fitovizany. Just WR3D 2K21Apk Download ho an'ny Android ary ankafizo ny serivisy rehetra amin'ny lalao.
Misy endri-javatra mahavariana misy taonina hita ao amin'ny WR3D 2K21 nataon'i Mike Bail Apk. Noho izany, ampidino sy apetraho amin'ny app Android ity rindrambaiko ity hijerena ny momba azy rehetra. Mizarà ny hevitrao amin'ny fizarana hevitra misy eto ambany.
Sokajy Games, simulation Tags Lalao 3D, Wr3d 2k21, Wr3d 2k21 Apk, Wr3d 2k21 Apk Ho an'ny Android, WR3D 2K21 Ho an'ny Android Post Fikarohana
NC Injector Apk misintona maimaim-poana ho an'ny Android [2022 ML Hack]
SPlayer Apk misintona maimaim-poana ho an'ny Android [2022 Nohavaozina]